အကောကျခှနျဦးစီးဌာနကွညောခကျြ Importer/Exporter မြားနှငျ့ MACCS Declarant မြားသိသာနိုငျပါရနျ - Industry Directory
၁။ ပွညျတှငျးအခှနျမြားဦးစီးဌာနမှ သတျမှတျသော TIN No. (Tax Payer IdentificationNumber) မြားအား ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ ကုမ်ပဏီမြားညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန၊ ကုနျသှယျရေး ဦးစီးဌာနနှငျ့ အကောကျခှနျဦးစီးဌာနတို့တှငျ Unique Number အဖွဈ လိုကျပါသုံးစှဲနိုငျ စရေေးအတှကျ အဆငျ့ဆငျ့ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျလကျြ ရှိနပေါသညျ။
၂။ ယငျးလုပျငနျးစဉျအရ ကုနျသှယျရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတျပေးနသေညျ့ ပို့ကုနျသှငျးကုနျမှတျပုံတငျအမှတျ (ပသက) အား TIN No. Format သို့ ပွောငျးလဲသုံးစှဲတော့မညျဖွဈသကဲ့သို့ အကောကျခှနျဦးစီးဌာန၏ MACCS System တှငျလညျး ၅-၁-၂၀၂၀ ရကျနတှေ့ငျ ပသက မှတျပုံတငျအမှတျအသဈမြားအား လကျခံဆောငျရှကျပေးနိုငျရေး ပထမအဆငျ့အနဖွေငျ့ တဈပွိုငျနကျတညျး လိုကျပါပွောငျးလဲသှားမညျဖွဈပါသညျ။ ထိုကဲ့သို့ အကောကျခှနျဦးစီးဌာနက လိုကျပါပွောငျးလဲရာတှငျ MACCS System အတှငျး ထိုကျသငျ့သော ပွုပွငျပွောငျးလဲမှု Upgrade မြား ဆောငျရှကျရမညျ ဖွဈပါသညျ။
၃။ စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာန၊ ကုနျသှယျရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတျပွနျသော သတငျးလှာအမှတျ (၇/၂၀၁၉)နှငျ့ (၈/၂၀၁၉) တို့ဖွငျ့ TIN No. Format သို့ ပွငျဆငျထားခွငျးမရှိသညျ့ ကုမ်ပဏီမြား၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ ကုမ်ပဏီမြားညှနျကွားမှုဦးစီးဌာနတှငျ မှတျပုံတငျခွငျးမရှိသညျ့ သမဝါယမအသငျးလီမိတကျမြား၊ အစိုးရဌာနမြား၊ အစိုးရမဟုတျသော အဖှဲ့အစညျးမြား၊ တဈဦးခငျြးကုနျသှယျမှုလုပျငနျးမှတျပုံတငျ (ITC) နှငျ့ တဈဦးခငျြး ကုနျသှယျခှငျ့ပါမဈမှတျပုံတငျနံပါတျမြားအစား ၅-၁-၂၀၂၀ ရကျနမှေ့ စတငျ၍ TIN No. ဖွငျ့ တူညီစှာ ပွောငျးလဲအသုံးပွုဆောငျရှကျနိုငျရေးအတှကျ ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ ရကျနအေ့ထိ ကုနျသှယျရေးဦးစီးဌာနသို့ မှတျပုံတငျအသဈမြား ပွနျလညျလြှောကျ ထားကွရနျနှငျ့ လြှောကျထားခဲ့ခွငျးမရှိပါက ၅-၁-၂၀၂၀ ရကျနမှေ့စ၍ ပို့ကုနျသှငျးကုနျနှငျ့ ဆကျစပျသညျ့လုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျနိုငျခွငျးမရှိကွောငျး ကွညောခကျြထုတျ ပွနျထားခဲ့ပါသညျ။
၄။ အထကျပါ ထုတျပွနျကွညောခကျြအရ ပထမအဆငျ့အနဖွေငျ့ ကုနျသှယျရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတျပေးသော ပကသအမှတျမြားအား TIN No. အဖွဈသို့ ပွောငျးလဲခွငျးအတှကျ အကောကျခှနျဦးစီးဌာန၏ MACCS စနဈတှငျ လိုအပျသော Data Migration လုပျငနျးစဉျ ကို (၅.၁.၂၀၂၀) ရကျနေ့ နံနကျ (၃:၀၀) နာရီမှ (၁၀:၀၀) နာရီ အတှငျး ဆောငျရှကျမညျ ဖွဈရာ အဆိုပါအခြိနျအတှငျး ကွညောလှာမြား တငျသှငျးခွငျးကို ခတ်ေတရပျဆိုငျးထားပေး နိုငျပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။ System Release ပွုလုပျသညျ့ ယငျးကာလ နောကျပိုငျး ကွညောလှာတငျသှငျးခွငျးနှငျ့ လိုငျစငျဖွတျတောကျခွငျးလုပျငနျးစဉျမြားတှငျ အခကျအခဲတဈစုံတဈရာ ပျေါပေါကျလာခဲ့ပါက ဖွရှေငျးရမညျ့လုပျငနျးစဉျမြားကို ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ ရကျနတှေ့ငျ အ ကောကျခှနျဦးစီးဌာန၏ Website နှငျ့ MACCS Facebook စာမကျြနှာပျေါတှငျ အခြိနျနှငျ့တဈပွေးညီ ကွညောခကျြမြား ထုတျပွနျပေးမညျ ဖွဈပါသညျ။UMFCCI, MCBA နှငျ့ MIFFA တို့ကိုလညျး တရားဝငျအကွောငျးကွားစာမြား ပေးပို့ သှားမညျ ဖွဈပါသညျ။
၅။ ထိုသို့ MACCS System အတှငျး Data Migration မြားပွုလုပျပွီးပါက MACCS စနဈ အနဖွေငျ့ ယခငျ ပသကမှတျပုံတငျ အဟောငျးမြားဖွငျ့ လုပျငနျးဆောငျရှကျမှု အပျေါတှငျ လကျခံဆောငျရှကျပေးနိုငျတော့မညျ မဟုတျသဖွငျ့ အထကျအပိုဒျ (၃) ပါ ကုနျသှယျရေး ဦးစီးဌာန၏ ကွညောခကျြပါအတိုငျး အခြိနျမီလိုကျနာဆောငျရှကျပေးကွရနျ လိုအပျပါသညျ။
၆။ သို့ဖွဈပါ၍ သှငျးကုနျထုတျကုနျလုပျငနျး မြားဆောငျရှကျနသေူမြား၊ MACCS Declarant မြားအနဖွေငျ့ အထကျဖျေါပွပါ အပွောငျးအလဲဖွဈစဉျနှငျ့ စပျလဉျြး၍ အကောကျခှနျဦးစီးဌာနမှ ကွညောခကျြမြားကို website နှငျ့ Facebook စာမကျြနှာတို့တှငျ စဉျဆကျမပွတျ ဝငျရောကျ ကွညျ့ရှုပေးကွပါရနျနှငျ့ အခကျအခဲမြားရှိပါက Help Desk Section သို့ ရုံးခြိနျအတှငျး မေးမွနျးစုံစမျးနိုငျပါကွောငျး လေးစားစှာ အသိပေးနှိုးဆျောအပျပါသညျ။
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကြေညာချက် Importer/Exporter များနှင့် MACCS Declarant များသိသာနိုင်ပါရန်
၁။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်သော TIN No. (Tax Payer IdentificationNumber) များအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတို့တွင် Unique Number အဖြစ် လိုက်ပါသုံးစွဲနိုင် စေရေးအတွက် အဆင့်ဆင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေပါသည်။
၂။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်အရ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးနေသည့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်အမှတ် (ပသက) အား TIN No. Format သို့ ပြောင်းလဲသုံးစွဲတော့မည်ဖြစ်သကဲ့သို့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ MACCS System တွင်လည်း ၅-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပသက မှတ်ပုံတင်အမှတ်အသစ်များအား လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ပထမအဆင့်အနေဖြင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း လိုက်ပါပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနက လိုက်ပါပြောင်းလဲရာတွင် MACCS System အတွင်း ထိုက်သင့်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု Upgrade များ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော သတင်းလွှာအမှတ် (၇/၂၀၁၉)နှင့် (၈/၂၀၁၉) တို့ဖြင့် TIN No. Format သို့ ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိသည့် သမဝါယမအသင်းလီမိတက်များ၊ အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် (ITC) နှင့် တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်ခွင့်ပါမစ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များအစား ၅-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ စတင်၍ TIN No. ဖြင့် တူညီစွာ ပြောင်းလဲအသုံးပြုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ မှတ်ပုံတင်အသစ်များ ပြန်လည်လျှောက် ထားကြရန်နှင့် လျှောက်ထားခဲ့ခြင်းမရှိပါက ၅-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ် ပြန်ထားခဲ့ပါသည်။
၄။ အထက်ပါ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော ပကသအမှတ်များအား TIN No. အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ MACCS စနစ်တွင် လိုအပ်သော Data Migration လုပ်ငန်းစဉ် ကို (၅.၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက် (၃:၀၀) နာရီမှ (၁၀:၀၀) နာရီ အတွင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ရာ အဆိုပါအချိန်အတွင်း ကြေညာလွှာများ တင်သွင်းခြင်းကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပေး နိုင်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ System Release ပြုလုပ်သည့် ယင်းကာလ နောက်ပိုင်း ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်းနှင့် လိုင်စင်ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက ဖြေရှင်းရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အ ကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Website နှင့် MACCS Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။UMFCCI, MCBA နှင့် MIFFA တို့ကိုလည်း တရားဝင်အကြောင်းကြားစာများ ပေးပို့ သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ထိုသို့ MACCS System အတွင်း Data Migration များပြုလုပ်ပြီးပါက MACCS စနစ် အနေဖြင့် ယခင် ပသကမှတ်ပုံတင် အဟောင်းများဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အပေါ်တွင် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တော့မည် မဟုတ်သဖြင့် အထက်အပိုဒ် (၃) ပါ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၏ ကြေညာချက်ပါအတိုင်း အချိန်မီလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးကြရန် လိုအပ်ပါသည်။
၆။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်နေသူများ၊ MACCS Declarant များအနေဖြင့် အထက်ဖေါ်ပြပါ အပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ကြေညာချက်များကို website နှင့် Facebook စာမျက်နှာတို့တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်နှင့် အခက်အခဲများရှိပါက Help Desk Section သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။